Bannaanka Park - Zhengzhou soo baxayo ayaa dheeldheel CO, Ltd.
Aasaasay Tan iyo 1999
Solutions for Goobta A Successful
Soo baxayo ayaa Group xoogga on bixinta xal dhameystiran in la odoroso aad park ee Miyeyydaan wax guul. samaynta Our soo maray si dhow ula kooxda shaqayn doonaa si ay u abuuraan waayo aragnimo gaar ah oo xiiso leh martidaada.
Ka dib markii si buuxda isgaarsiinta ee dhinac kasta iyo si faahfaahsan, samaynta our abuuro renderings 3D la aaladaha farsamada ugu dambeeyay si aan idiin tuso saamaynta muuqaalka mashruuca mustaqbalka. Tani dhibic firfircoon of view caawisaa maamulayaasha in ay samayso doorashada ugu fiican.
Dheeldheel Qalabka Supply
Soo baxayo ayaa Group diyaarin doonaa soosaarka raacid ku salaysan aad doorashada ka design ka. Sidoo kale, qalabka ahaanayta diyaar u yahay inuu soo baxayo ayaa ayaa qalabka xoog kooxda iyo wax soo saarka casriga R & D mahad.
Rakibaadda & Operation Tababarka
A koox farsamo yaqaan xirfad dunida u safri inuu kormeero iyo duwo aasaasida raacid ah, oo kaa caawinaya in aad si ay u tababaraan shaqaalaha inay ku shaqeeyaan oo ay u ilaaliyaan qalabka si sax ah, si ay macaamiisha aad ku raaxaysan karaan raacid ammaan iyo madadaalo.
Ka dib-Sale Adeega
Kaalmada Farsamo waqtiga la siin doonaa, xataa duuli farsamo si aad dalka haddii loo baahdo. telefoonka degdegga ah waxaa laga on 24 / 7.Prodigy Group waxay bixiyaan qaybaha nugul loogu isticmaalo firaaqada for free.
Ka hor inta dhalmada baxayo ayaa Group waxay bixiyaan qaybaha nugul loogu isticmaalo firaaqada for free. Ka dib markii dhalmada, ayaanu bixinaa ka badan 1000 dayactir si aad u hesho raacid ka dib in ay ka shaqeeyaan haddii ay tahay garoomada ka maqnaa.
Fuula Kids Park
Cinwaanka: MAYA. 12, Zhannan Road, Xingyang, Zhengzhou City, Shiinaha
Wax soo baara jir
Nama uu soo raaco by:
Dhamaan xuquuqda daabacaaddu waxaa soo baxayo ayaa Group.